Xubnihii guddiga farsamada Jubbaland oo dib ugu laabtay Kismaayo | KEYDMEDIA ONLINE
Xubnihii guddiga farsamada Jubbaland oo dib ugu laabtay Kismaayo
Xubnihii guddiga farsamada ku matalayay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee Jubbaland, kaddib shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xubnihii guddiga farsamaa ku matalayay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kaddib markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaallo shalay ilaa habeen hore kuwaasoo lagu beegsanayay xubanaha golaha midowga musharaxiinta ee ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Xubnaha maanta dib uga ambabaxay magaalada Kismaayo ayaa ku matalayay guddiga farsamda dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana lagu soo warramayaa in sababo amni dartood ay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan ka qeyb galka shirka uu ku baaqay Madaxweynaha Farmaajo ee loo qorsheeyay inuu ka dhici doono Muqdisho.
Guddiga maanta ku laabtay Kismaayo ayaa waxay qeyb ka ahaayeen xubnihii ku shirayay magaalada Baydhabo, iyagoo ku matalayay dowlad goboleedka Jubbaland heshiiska hordhaca ah ee loo qorsheeyay in saxiixiisa uu ka dhaco magaalada Muqdisho.